IINGCAMANGO ZOKUHLAMBELA KWIINDAWO EZINCINCI - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iingcamango zokuhlambela kwiindawo ezincinci
Iingcamango zokuhlambela kwiindawo ezincinci
Ezi zimvo zangasese zezithuba ezincinci zabelana ngeendlela zokuyila ukwenza igumbi lakho lizive likhulu kwaye ufumane uninzi lwayo kuyo yonke indawo. Igumbi lokuhlambela elincinci akufuneki uzive ungonwabanga kwaye uvalelwe. Nokuba utshintsha umbala wepeyinti, ukongeza into engento eyahlukileyo, okanye ukutshintshela indawo yokuhlambela kukho iindlela ezininzi zokufumana indawo eninzi kwigumbi lakho lokuhlambela elincinci.
Sebenzisa umbala ongathathi hlangothi
Qaba isilingi utshatise iindonga
Tshatisa umbala wethayile nombala wodonga
Yongeza ishawari yeglasi ecacileyo
Zama ukongeza iishelufa zeglasi
Faka iisinki zenyawo
Yongeza into engekhoyo yokuhlambela ngemilenze
Sebenzisa iikhabhathi ezineshelfu evulekileyo
Gcina indawo yokugcina ngokugungxula ngeendonga
Sebenzisa iitawuli zeetawuli ngaphezulu kwebhafu
Sebenzisa iiwindows zakho
Gweba phantsi i-clutter
Abamhlophe abamhlophe, ukungathathi hlangothi kunye nemibala ye-pastel inokwenza igumbi lokuhlambela lizive ngakumbi ngakumbi ngokuqaqamba njengoko zibonisa ukukhanya kulula.
Ngokusebenzisa iithoni ezifanayo kunye nexabiso lemibala kwiikhabhathi, iitrimu kunye nezinto ezenziwe ngomthi banokudibanisa kunye ukuze basebenze ukwandisa indawo.
umakhulu weesuti zekhefu lomtshakazi
Ukugcina izinto ekubeni zingashukumi kakhulu sebenzisa izixhobo ezinemibala engqindilili, ubugcisa, okanye iilensi ukwenza amandla kunye nokongeza umphumo.
Sebenzisa isikimu esidibanisa umbala kuya kunceda indawo yande ngokubonakalayo. Icebo elinye elisoloko lisetyenziswa kukuhamba ngokukhanya komthunzi omnye eluphahleni olusicaba njengoko zihlala zijongeka zimnyama kuneendonga.
Iziphumo zizonke ziya kuncitshiswa kwinani leenguqulelo ukunika ingcinga yendawo ebanzi ngakumbi.
Sebenzisa imibala eyahlukileyo kunokubonakala ngathi kusikwa igumbi phakathi. Ukugcina indawo encinci ijongeka inkulu kangangoko kunokwenzeka ukunqanda imibala eyahlukileyo kwaye usebenzise indlela edibeneyo.
Elinye icebo kukuqhuba i-tile kwindawo yokuhlamba yonke indlela eya eluphahleni ukunqanda naluphi na utshintsho kunye nokusika imigca eyahlukileyo. Elinye iqhinga kukudibanisa iithayile zeglasi ukwenza ubumenyemenye kunye nobunzulu obongezelelweyo.
Bamba ikhethini yokuhlamba yendabuko kwaye uzame ukongeza iglasi ecacileyo ejikeleze ishawa yakho ukuvula isithuba. Sebenzisa isilayidi, okanye umnyango wepokotho yenye indlela elungileyo yokwandisa indawo yakho exabisekileyo.
yeyiphi na iringi yokubandakanya yakho eqhubekayo
Ngakwimigca efanayo neyeshawa yeglasi unokunyusa umda wendawo kwindawo yakho yangasese ngokongeza indawo yokugcina iglasi.
Ukubeka isinki sokuntywila kunokuvula indawo. Ukuhamba usiya kwinto engento yendabuko kuya kukubonelela ngakumbi kwigumbi elingaphantsi, kodwa ngexabiso lokugcina. Ukulungisa oku zama ukongeza ikhabhathi ende ecaleni kweemfuno zakho zokugcina.
Ukuba uthatha isigqibo sokuhamba nekhabhathi engelutho zama ukusebenzisa isitayile sefenitshala ngemilenze. Olu hlobo luza kukuvumela ukuba ubone ngaphantsi kobunzulu bokubona kwaye wongeza umoya othile kwisithuba. Uninzi lukhetha ukusebenzisa iibhasikithi phantsi kwento engento evulekileyo yokugcina izinto ezininzi zelinen kunye nezixhobo.
Iikhabhathi ezineshelfu evulekileyo ziziva zincinci. Elinye iqhinga lokubonwayo kukusebenzisa ikona okanye into enamacala egoso eya kuthi inganyanzelisi.
Ukuphinda ujonge ukugcinwa kweshelfu yakho phakathi kweendonga zodonga kunokukunika indawo yokusebenzela. Oku kunokunceda ukugcina izixhobo zikhutshelwe kude ukunciphisa i-clutter kunye nokubonelela ngendawo yokucoca. Iishelufa ezixineneyo kufuneka zisetyenziswe xa kunokwenzeka.
sisiphi isandla onxiba umsesane womtshato
Isithuba sinokwandiswa kwigumbi lokuhlambela elincinci ngokwenza isipili eludongeni. Izibuko zinokongeza ukuqonda okunzulu kwaye zikhanyise igumbi. Izibuko ezigubungela udonga lwendlu yangasese kwaye zifike esilingini kwaye zikhanyiselwe ngokukhanyisa ngaphezulu zinokwenza indawo ikhule.
Iitawuli ezixhonywe ngaphezulu kwebhafu zenza ukuphuma kweshawa kube lula ngakumbi kwaye ugcine kwindawo yodonga ngaxeshanye. Iiroli zetawuli zinokufakwa ngaphambili kwento engeloncedo yokugcina igumbi.
isimemo somtshato kunye neetemplate zeefoto
Akukho nto ibetha imvakalelo yokukhanya kwendalo okusasaza ngeewindows zakho ukuze zikwamkele kusasa. Ukuba neefestile ezingatyhilelwanga kuhlala kunceda ekukhanyeni nasekwandiseni imvakalelo yalo naliphi na igumbi.
Ukuba kunokwenzeka yenza iifestile zisasaze ukukhanya kwendalo kangangoko zinako ngokuzishiya zinganxitywanga okanye zigqunywe ngeglasi enekhephu. Ukufaka ukukhanya kwelanga kunokuzisa ukukhanya kwendalo kwaye ubonelele ngasese windows eqhelekileyo ngoku inokuvumela.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, xa yonke intshi yendawo yokubala izama ukususa nayiphi na into ebekwe malunga nayo. Enye yezona mbono zinexabiso eliphantsi kwaye zisebenza ngokufanelekileyo kwiindawo ezincinci kukugcina kunye nokulahla izinto ezingezizo eziyimfuneko.
Uya kumangaliswa kukuba igumbi lokuhlambela livakalelwa kangakanani xa ususa izinto zokubala kwaye ulahla izixhobo ezingaphezulu. Ukulungiswa okulula kunokuyihlaziya indawo kwaye kuyenze ibe mnandi.
Uyilo oluMnyama oluMhlophe kunye noMhlophe - Iingcamango ezingama-25 eziLungileyo zeGumbi lokuhlambela - Uyilo lweNdlu yangasese eNtofontofo
izinto zokubeka irejista yomtshato
yintoni ikhefu lomtshato
umtshato enkosi kubazali